Izvi ndizvo zvakanakira chiitiko chakakosha "Valentine" chePokémon GO | IPhone nhau
Hatigoni kuramba izvozvo Pokémon GO yaive yakabudirira muzhizha regore rapfuura. Mushure mekutanga kwayo, mamirioni avanhu akaenda kumigwagwa chero nguva yezuva kuti vatore yavo yavanofarira pokémon. Sezvo kufarirwa kweapp kwakaramba kuchienderera, Niantic akaichengeta tangisa nhau kuyedza kuve nechokwadi chekuti huwandu hwakanyanya hwevashandisi vanoshanda vakaramba vachishandisa mutambo. Asi zvinosuruvarisa (kana nerombo rakanaka), kufarirwa kwemutambo kwadzikira mumwedzi ichangopfuura.
Kubudikidza newebhusaiti yayo, iyo Pókemon GO timu yakazivisa chiitiko chakakosha kupemberera "Zuva reValentine". Ichi chiitiko, chinotevera mutsara weakambo pfuura, chine nguva yekushanda matinenge tiine nhevedzano yemabhonasi uye zvichave nyore kutora imwe pokémon. Chiitiko chinotanga nhasi masikati na20.00: XNUMX masikati (nguva yeSpanish).
Zviitiko zvakakosha: chishandiso chekuvandudza kushandiswa kwePokémon GO
Mamirioni avanhu anoramba achishandisa mutambo zuva nezuva. Vashandisi vanoshanda vanogamuchira zvigadziriso nemufaro uye vachida Niantic gadzira uye uvabvumidze kuramba vachitsvaga maturusi matsva uye mashandiro aunogona kunakidzwa nawo Pokémon GO
Nezuva raValentine rave pedyo nekona, hatina kukwanisa kufunga nezvenguva inotapira yekuwedzera huwandu hwehwitsi yauchazowana pese paunobata, uchihwadzira, uye uchiendesa Pokémon. Mumwe wako Pokémon arikupindawo mumweya weZuva raValentine uye anowana zviwitsi zvakapetwa kaviri!
Akanga ari mwedzi mishoma yapfuura apo Pokémon GO yakaunza iyo zviitiko zvakakosha, nzira yekukurudzira kushandiswa kwemutambo pakati pevashandisi vanonyanya kushanda. Izvi zviitiko zvakakosha zvinobvumira vatambi kuwana mibairo iri nani yekubata pokémon yavo. Asi pamusoro pezvo, imwe pokémon ichaonekwa kazhinji, saka ivo vanozogona kuishandura nekukurumidza.
Mune ino kesi, chiitiko chakakosha chevalentine uchawana zvinotevera mabhenefiti:
Imwe pink pokémon yakaita saChansey naClefable ichaonekwa kazhinji
Cleffa, Igglybuff uye Smoochum zvichave nyore kuwana mumazai akachekwa
ari bait module ichagara maawa matanhatu
Aya maficha anogona kushandiswa kubva nhasi (Kukadzi 8 kubva ku2017 na20.00: XNUMX p.m.) kusvika Kukadzi 15 kubva ku2017 na20.00: XNUMX p.m., nguva ichaitika chiitiko ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon GO inopemberera "Zuva reValentine" ine chiitiko chakakosha
Flipboard inovandudzwa mukati nekunze mushanduro 4.0